“အကြည့်များ” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Photography » “အကြည့်များ”	4
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Sep 24, 2016 in Photography, Think Different |4comments
Foolish Girl says: အမြင်မတူရင်တောင် အဲဒီမတူညီတဲ့အမြင်တွေက အကောင်းမြင်တတ်တာမျိုးဆိုရင်…………………
Thint Aye Yeik says: အဲ့ဒီ မတူတဲ့အတွေးတွေနဲ့ မြင်ထားတဲ့အမြင်တွေထဲက
.ကောင်းတာလေးတွေကို စုပြီး အတူတူထပ်တွေးကြ ထပ်မြင်ကြ လုပ်စရှိတာကို စုပြီး လုပ်ကြရင်. . .
ကိုယ့်မြင်းကိုယ်စိုင်း. . .ပလိုင်းပဲပျောက်ပျောက်. . .
uncle gyi says: အဲဒီမတုတဲ့အမြင်တွေပေါင်းကြည့်လိုက်ရင်
အင်မတန်လှတဲ့ပန်းချီကားတချပ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်နော်
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ဒီမှာတော့ ရန်တွေဖြစ်နေကြတယ်